Gambia: 2007 Tourist Season - Yekutanga Scandinavian Ndege Inosvika
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Gambia: 2007 Yevashanyi Mwaka - Yekutanga yeScandinavia Ndege Inosvika
Gambia: 2007 Yevashanyi Mwaka - Yekutanga yeScandinavia Ndege Inosvika
Sezvo mwaka wevashanyi unotanga, vashanyi vanobva kunzvimbo dzakasiyana dzeEurope vanoenderera mberi nechisimba "Smiling Coast" yekuWest Africa, Gambia.
Mazana maviri negumi nerimwe vashanyi (211) vanobva kuFinland vakasvika nguva pfupi yadarika kuburikidza neBanjul International Airport muYundum.
Vachitaura nevatori venhau Lamin Satio, Marketing Director kuGambia Tourism Authority (GTA), vakati vari kutarisira mwaka unoshamisa uye unobudirira wevashanyi.
Maererano naye, tarisiro ine tariro inoratidza kuti vari kutarisira chaizvo vashanyi vakawanda gore rino, kunyanya vanobva kuUnited Kingdom (UK). Akawedzera kuti "kana pakave nekudzikira kwenhamba yevashanyi vekuScandinavia vari kuuya muGambia, gore rino tichaona nhamba huru yevashanyi vachisvika nendege yekutanga kubva kuNorway".
Vakurudzira veruzhinji kuti varatidze kuti Gambia ichiri imwe yenzvimbo dzinoyevedza muAfrica.
Akatsanangura vanhu veGambia sevanhu vakanaka uye akateterera ma "Bumsters" kuti abve kubva kune vashanyi sezvo zvingasvibisa chimiro chenyika.
Sekureva kwaCharbel Hobeika, Managing Director weGambia Tours, mwaka wevashanyi wegore rino unotarisirwa kuve nezvibereko, sezvo dzimwe ndege kubva kuFinland, Norway, Denmark neSweden, dzichasvika dzine vanhu vangangosvika mazana masere nemakumi mashanu.
Akati “mwaka uno unoratidzika kunge wakanaka zvikuru uye huwandu huchakwira zvakanyanya uye mahotera anenge atove akabhuka zvakakwana uye achitarisira kuti haazowandirwe. Tinovimba chaizvo mwaka une zvibereko uye unobudirira”.
Vakawedzera kuti vashanyi vachagara mumahotera akasiyana munyika, akaita seSenegambia, Kairaba, Sheraton, Tafbel nemamwe.
ALL FOOTBALL — Areli https://www.football-shirtssale.com/ Sportswear United Kingdom Yakachipa Nhabvu Shirt shopu: https: //www.football-shirtssale.com/
Zvinofanira kunge zvakaoma kuyedza kukupa dhizaini nyowani yenhabvu yenhabvu. Chero chiitiko, maT-shirts akagadziridzwa akakwana kana t-shirt yakadhindwa isingaite. Kubva ku yakachipa nhabvu shati uk nhandare inomira pamberi pemubhedha wako wekamuri, remekedza mutambo neNike® NFL sport kits, NFL hats, hembe nezvimwe. Manchester United Away Black Football Shirt 2019/2020 zvine rezinesi zviri pamutemo NFL giya. Mwenje Kufunga Icon Png Luxury 13 Sporty Soccer Football Icons zvakachipa Celtic nhabvu shirts izvo zvinogona kuita zvakanaka pakati pezvimwe.
Nhamba dzepafudzi dzinowanzoita 4 ″ nhamba, dzakaiswa 2 ″ kubva pamusoro pe Celtic Home Nhabvu Shirt 2019/2020 bendekete pamutambo wenhabvu wetsika. Tine mafekitari emunhu ekutipa kits dzenhabvu Q:Makadii emhando9 A: Isu tinongotengesa zvemhando yepamusoro kits dzenhabvu. Dhizaina yakasarudzika yekuvharisa kits, hoodies, t-shirts, hati uye zvishandiso kuti uwedzere imwe fashoni. Mwana kits Manchester United Home Nhabvu Shirt 2019/2020 kune chitarisiko chevashandi vako. Tora miniti yekuzadza rudzi rwekukumbira neimwe data nezve yunifomu yako yenhabvu yakasarudzika.
MaT-shirt edu emunhu akaongororwa yakachipa premier ligi nhabvu kits kuitira kushanda zvakanaka kwenguva refu sezvo isu tese tichiziva kukosha kwemhando yepamusoro kwauri kana ukagadzira yako T-shirt. Peronalize T-shirts nedhizaini yako kana sarudza Manchester United White Nhabvu Shirt 2019/2020 kubva kuzviuru zvezviuru zveakagadzirira kuwanikwa T-shirt dhizaini matemplate. Wooter Attire zvinoreva kuti iwe unogona kugadzira yunifomu yenhabvu inogoneka. Iyo VO2 Nhabvu Shirt Manchester United Home Nhabvu Shirt 2019/2020 ndicho chipfeko chakakosha chevatambi vese venhabvu.
Africa nhandare yendege Dhenimaki patani Europe Finirendi Manchester Marketing Noweyi Pinterest hembe Siwidheni T-shirt The Gambia ushanyi United Kingdom West Africa
Gakava reIIPT paWorld Travel Market
Samoa yakagadzirirwa kuvhurazve miganhu yayo kune dzimwe nyika ...